Funda ngenqubo ye-acid leaching ye-Co Mo esekwe ku-hydrotreating catalyst
Indlela yokuphendula ebusweni (i-RSM) isetshenziselwe ukutadisha inqubo ye-nitric acid leaching yemfucumfucu Co Mo esekwe ku-hydrotreating catalyst. Inhloso yalolu cwaningo bekuwukwethula i-CO ne-Mo kusuka ku-catalyst esetshenzisiwe kuya ku-solvent ngendlela encibilikiswa ngamanzi, ukuze kwenziwe lula ukuhlanzwa okulandelayo ...
Ukulungiswa kwesihlungo sekhabhoni yamangqamuzana kusuka ku-carbon fiber
Uma amachashazi we-jujube we-huanbingwei ne-CMB ahlanganiswa ndawonye, ​​impahla entsha izoba nalezi zinzuzo ezilandelayo: akukho uthuli oluzokhiqizwa uma lusetshenziswa. Kuthuthukiswa yi-5-FU. Ama-sieve we-Carbon fiber yamangqamuzana anekhono lokushintshana le-ion angalungiswa ngokuqhubeka nokwelashwa ngokomzimba nangamakhemikhali. I ...
Izici nokusetshenziswa kwekhabhoni eyenziwe yasebenza
I-carbon eyenziwe yasebenza: uhlobo lwe-adsorbent engeyona eye-polar esetshenziswe kakhulu. Ngokuvamile, idinga ukugezwa nge-dilute hydrochloric acid, ilandelwe yi-ethanol, bese igezwa ngamanzi. Ngemuva kokumiswa ku-80 ℃, ingasetshenziselwa ikholomu chromatography. I-granular activated carbon iyona khetho engcono kakhulu kukholamu ch ...